एक्कासी भाइवरमा ८० लाख र १० तोला सुन चिट्ठा पर्यो भन्दै आयो फोन आएपछि… – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > एक्कासी भाइवरमा ८० लाख र १० तोला सुन चिट्ठा पर्यो भन्दै आयो फोन आएपछि…
एक्कासी भाइवरमा ८० लाख र १० तोला सुन चिट्ठा पर्यो भन्दै आयो फोन आएपछि…
admin June 26, 2020 June 26, 2020 Uncategorized	0
काठमाडौं । प्रविधिले मानिसको जिवन निकै सहज बनाएको छ । तर त्यही प्रविधि सहि काममा सदुपयोग नहुँदा मानिसको ज्यान समेत गएका छन् । कति मानिस प्रविधिवाट ठगिएका पनि छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालवाट तपाईलाई ठूलो रकम चिट्ठा पर्यो त्यो रकम प्राप्त गर्ने प्रकृयाका लागि तपाईले हामीले दिएको बैंक एकाउण्टमा पैसा जम्मा गरिदिनुस् भन्दै म्यासेज, फोन आउने गरेका छन् ।
त्यस्ता कुरा विश्वास गर्नेहरुले लाखौं रकम समेत डुवाएका छन् । ‘तपाईलाई अमेरिकाको कल सेन्टरबाट म्यासेज गरिएको छ। तपाइँको भाइबर नम्बरमा ५० लाख भारु र १० तोला सुन उपहारमा परेको छ।’ यस्तो म्यासेजमा विश्वास गरेका ब्यक्तिले लाखौं रुपैया गुमाएका छन् । यस्तो म्यासेज केही दिनदेखि विभिन्न व्यक्तिलाई भाइबरमा यस्तो म्यासेज पुग्यो। केहीले फेसबुकमै समेत यस्तो म्यासेज भेटे ।
म्यासेजमा लेखिएको थियो, ‘५ देशका भाइबर नम्बर समावेश गरिएकोमा नेपालबाट तपाइँले उपहार जित्नु भएको छ। नेपाल, भारत, अमेरिका, भुटान, दुवई समावेश गरिएको थियो।
म्यासेजमा भनिएको हुन्छ, हरेक देशका ५०, ५० भाइबर नम्बर छानिएको थियो। जसमा तपाईले उक्त पुरस्कार जित्न सफल हुनु भएको हो। तपाई र तपाईको परिवारलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब तपाईले भारतको एसबीआई बैंकको धर्मेन्द्र प्रताव सिंहसँग कुरा गर्नुहोस्। उहाँले तपाइँलाई पुरस्कारको नम्बर दिनुहुनेछ। तपाईको पुरस्कारको नम्बर हो ००५२६। अब तपाईले धर्मेन्द्रको ह्वाट्सएप नम्बर दिन्छु त्यो नोट गर्नुहोस् ००९१९९७११३०४१० यो उनको नम्बर हो। यो नम्बरमा उनलाई ह्वाट्सएपमा कुरा गर्नुहोस्।’
यस्तो म्यासेज पाएपछि कुरा गर्दै जाँदा उनी आफु ठ’गिएको समेत थाहा पाउँदैनन् । कतिले विश्वास गरेर उनीहरुले भने अनुसारको पैसा समेत जम्मा गरिदिएका छन् । अहिले प्रहरीकहा यसरी ठ’गिएको भन्दै उजुरी दिनेहरुको संख्या बढेको छ । सर्वसाधारण मात्र होइन पढेलेखेका र उच्च पदस्थ ब्यक्ति पनि ठ’गिएका छन् ।
प्रहरीले त्यसरी ठ’गी गर्ने गि’रोहलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पुकार बर्मा, नवीन भण्डारी, आकाश अग्रवाल, एस अग्रवाल, एमडी सर्फराज हुन् । उनीहरुलाई प्रहरीले काठमाडौंको टेकु तथा स्वयम्भुको छाउनीबाट पक्राउ गरेको हो ।
कंगनाले यी हुन् फिल्म माफिया भन्दै आलियादेखि साराका पुराना तस्वीर शेयर गरेपछि बलिउडमा हँगामा! हेर्नुस्
एमसिसि पास गर्न नेपाललाई यस्तो धम्की! नगरे आत’ङ्कबादी निशानामा नेपाल!
सरकारले विप्लवकाे अामसभा संविधान विपरित भए रोक्न सक्ने